Taylor apologises to Mooney - Independent.ie
Brendan Taylor has apologised to John Mooney, pictured, over an "unacceptable article" in the Zimbabwe Herald
March 11 2015 07:06 AM
Zimbabwe wicketkeeper Brendan Taylor has offered his apologies to John Mooney after the Ireland all-rounder was the subject of an "unacceptable article" following his match-changing catch to help send the African nation out of the World Cup.
A story from Zimbabwe Herald journalist Robson Sharuko, which ran on Monday under the headline 'Alcoholic dumps Zim out of WC', questioned Mooney's honesty after he claimed a catch near the rope to dismiss Sean Williams for 96.
Ireland went on to win the game in Hobart by five runs to keep their quarter-final hopes alive.
Cricket Ireland (CI) is considering legal action over the article and has reported the Sharuko's remarks to the International Cricket Council.
CI chief executive officer Warren Deutrom has also condemned the Zimbabwe Herald's "breath-taking crassness and a gross error of editorial judgement".
The article was still on the newspaper's website on Wednesday and Taylor, who stood in as Zimbabwe's captain against Ireland, has felt obliged to apologise.
"On behalf of the Zimbabwe cricket team. We just want to express our apologies to @Irelandcricket and John Mooney for the unacceptable article," he wrote on Twitter.
"In relation to the story that has appeared in the Zimbabwe Herald, it would be easy to dismiss it as a childish diatribe if it wasn't for the vicious personal attack on John which cannot pass without comment, and possible action," Deutrom said in the CI statement.